उन्नतिले हकप्रद शेयर जारी गर्ने | गृहपृष्ठ
Home शेयर / बैङ्किङ गतिविधि उन्नतिले हकप्रद शेयर जारी गर्ने
पुस ११, भैरहवा (अस)। उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको साधारणसभाले १ः१ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । संस्थाको शनिवार सम्पन्न प्रथम साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
रूपन्देहीमा आयोजित उक्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा अधिकृत पूँजी, रू. ८ करोड ८० लाख पुगेको छ भने जारी पूँजी रू. ४ करोड ४० लाख पुगेको छ । त्यस्तै, सो अवधिसम्ममा संस्थाको चूक्ता पूँजी रू.३ करोड ८ लाख पुग्ने कम्पनी सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेमबहादुर पाठकले बताएका छन् ।
२०७२ मङ्सिर मसान्तसम्म संस्थाको कुल ग्राहक सङ्ख्या ४ हजार ८ सय ४० पुगेको छ । सोमध्ये २ हजार ७ सय ८४ जनालाई रू. ११ करोड ३४ लाख २० हजार कर्जा लगानी गरिएको संस्थाले बताएको छ । लगानी गरिएको रकममध्ये रू. ३ करोड ७३ लाख असुली भइसकेको छ भने रू. ७ करोड ६० लाख उठाउन बाँकी रहेको छ । सो अवधिसम्ममा संस्थामा कुल निक्षेप रू.१ करोड ३३ लाख ६७ हजार परिचलान भएको संस्थाले जानकारी दिएको छ ।
सभाले भरत कुमार शाह, खड्ग बहादुर राना, कुसुमराज ज्ञवाली र लोकनाथ नेपाललाई आगामी ४ वर्षका लागि सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूहको तर्फबाट निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।